प्राथमिकतामा कृषि, एउटै वडामा १५ टुबेल जडान – Puleso
झलारी – शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नं. ९ ले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा स्यालु टुबेल जडान गरेको छ । वडा नम्बर ९ का आधिकांस स्थानीय कृषि पेशामा आवद्ध भएकाले वडा कार्यालयले स्यालु टुबेल जडान गरेको वडा अध्यक्ष रमेश ऐरले बताए ।
उनका अनुसार वडाका ९९ सय प्रतिशत स्थानीय कृषिमा आधारित रहेर घर खर्च चलाईरहेका छन् । ‘यहाँका स्थानीयसँग जमिन छ,तर सिचाँईको व्यवस्था नभएका कारण समयमा खेतीपाती गर्न समेत पाउँदैन थिए, अब स्यालु टुबेल जडान गरेपछि केहीले भएपनि आवश्यक पर्दा सिचाई गर्न पाउँछन्,’ उनले भने । वडाको ११ लाख र स्थानीयको ४ लाख ४० हजार रुपैयाँको लगानिमा १५ स्यालु टुबेल जडान गरिएको वडा अध्यक्ष ऐरले बताए ।
‘१५वटा टुबेल मध्ये १ वटा टुबेल बिन्द्रावन सामुदायिक वनमा जडान गरिरहेका छौं, जंगली जनावरका लागि पानी र विरुवा उत्पादन गर्न सामुदायिक वनमा डिप टुबेल जडान गर्दै छौं,’ वडा अध्यक्ष ऐरले भने । उनले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका १२ वटै वडा मध्ये वडा नं. ९ ले कृषिमा बढी बजेट विनियोजन गरेर काम भइरहेको दाबी गरे ।
अगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार अगामी आर्थिक वर्षका लागि निति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भरखरै सम्पन्न टोल भेलाबाट वडा नं. ९ को नौखरी बाट १० वटा बोरिङ र सिसैयाको विभिन्न टोलबाट २० गरि ३० वटा बोरिङको स्थानीयले माग आएको छ ।